Xukun danbi daroogo la xiriira dartiis ayaa loogu diiday baasaboor cusub oo ay ku safraan. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Xukun danbi daroogo la xiriira dartiis ayaa loogu diiday baasaboor cusub oo...
Xukun danbi daroogo la xiriira dartiis ayaa loogu diiday baasaboor cusub oo ay ku safraan.
Saldhiga booliska Koonfur-Galbeed ee dalkan Norway, ayaa diiday inay baasaboorka cusub oo Norwiiji ah ay siisaan labo qof oo mukhaadaraadka adeegsada, horeyna loogu xukumay danbiyo la xiriira inay si xad-dhaaf ah u adeegsadeen daroogo.
Labadan qof ayaa ka dacwooday go´aanka booliska, waxeyna cabashadooda u gudbiyeen hey´adda xukunta booliska Norway ee Politidirektoratet. Kuwaas oo qiimeyn ay kiiska ku sameeyeen kadib, labadaas qof u ogolaaday in la siiyo baasabooro ay ku safraan.
Booliska: Waxaan ka shaki qabnaa safar dibadda ah
Mid kamid ah labada qof ee boolisku ay u diideen baasaboorka ayaa ah haweenay horey marar badan loogu xukumay danbiyo la xiriiro daroogo. Haweeneydan ayaa sheegtay inay rabto inay hesho baasaboor cusub, sinay u sameysato Koonto Bangi, Bank ID, ayna u dirsato kaarka Meldekort-ga ee heyá dda NAV.
Balse booliska ayaa dhankooda sheegay inay ka shaki qabaan in sababta ay haweeneydaas u raadineyso baasaboor cusub, ay aheyd inay u baxdo safar dibadda ah oo arrimo sharci daro ah la xiriiro. Waxeyna haweeneydaas u diideen baasaboor cusub, Iyaga oo go´aankooda ku dhisay in haweeneydaas horey marar badan loo xukumay.
Haweeneyda ayaa cabasho u dirtay hey´adda xukunto booliska, kuwaas oo hada haweeneydaas u ogolaaday inay hesho baasaboorka ay boolisku u diideen.
Kiiska qofka labaad ayaa isna la xiriiri arrintan oo kale, wuxuuna qofka ay baasaboorka u diideen ahaa qof loo xukumay danbiyo la xiriiro daroogo.
Xigasho/kilde: Rusdømte ble nektet nytt pass.
Previous articleSoomaalida heysata dhalashada Norway ee dalka ka maqan, meelahan ayay ka codeyn karaan.
Next articleOljefondet: 2,4 milyan kr ayaa sanduuqa keydka lacagta shidaalka ugu jirto qof kasta oo Norwiiji ah